बाइकमा मो’टो टायर प्रयोग गर्दा कस्तो फाइदा, के बेफाइदा ? – Khabarhouse
बाइकमा मो’टो टायर प्रयोग गर्दा कस्तो फाइदा, के बेफाइदा ?
Khabar house | १७ फाल्गुन २०७६, शनिबार ०२:५१ | Comments
काठमाडौं । आजकल युवामाझ आफ्नो बाइकलाई आकर्षक देखाउने होड बाजिनै चल्ने गर्छ । आफ्नो बाइकको लुक्स चेन्ज गर्नका लागी मोडिफाइ गर्ने ट्रेन्डनै युवा माझ चलिरहेको छ । बाइकलाई मोडिफाइ गर्दा टायर सबै भन्दा महत्वपूर्ण पाटर्स हुन्छ । बाइकमा ठुलो टायर प्रयोग गर्दा जुनसुकै बाइकको पनि स्पोर्टी लुक्स आउँछ । यसकारण पनि बाइक मो’डिफाइ गर्दा टायर महत्वपूर्ण हुने गर्छ ।
बाइकमा मोटो तथा ठुलो टायर प्रयोग गर्दा यसका फाइदा तथा बेफाइदा दुबै रहेका छन्। बाइकमा कुन साइजको टायर प्रयोग गर्ने भन्नेकुरा बाइकको इन्जिन क्षमतामा निर्भर गर्ने गर्छ। यदि बाइक १००सीसी वा १२५ सीसीको छ भने, यसमा मोटो टायर प्रयोग गर्दा बाइक लुक्स स्पोर्टी त देखिन्छ नै साथमा सडकमा टायरको ग्रिप पनि राम्रो हुन्छ ।
तर, मोटो टायर प्रयोग गर्दा थोरै सीसीका बाइकको माइलेजमा धेरैनै गिरावट आउँछ किनकि मोटो टायरको तौल धेरै हुने गर्छ । १०० वा १२५ सीसीका बाइकमा मोटो तथा ठुलो टायर प्रयोग गर्दा बाइकको इन्जिनमा समेत असर गर्ने हुन्छ। यसकारण थोरै सीसीका बाइकमा मोटो तथा ठुलो टायर प्रयोग गर्दा स्पोर्टी लुक्स त आउछ तर बाइकको प्र’दर्शनमा धेरै गिरावट आउछ ।
१५० सीसी भन्दा माथि सीसीका बाइकहरुमा आजकल मोटो टायर प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ। धेरै जसो बाइकका जानकारहरु बाइकमा ठुलो तथा मोटो टायर प्रयोग नगर्न सल्लाह दिन्छन । बाइकमा आउने टायर बाइकको बनावट, माइलेज तथा इन्जिन क्षमतालार्इ सुहा उँदो कम्पनीले प्रयोग गर्ने गर्छ । टायर ट्युव लेस र ट्युव गरी दुई प्रकारको हुन्छ । पैसाको हिसाबले ट्युवलेस टायर केही म’हंगो भएता पनि यसका धेरै फाइदा रहेका कारण आजकल अत्याधिक ट्युवलेस टायर प्रयोग हुने गरेको छ ।
ट्युवलेस टायरले सडकमा राम्रो ग्रिपका साथ काम गर्छ । पं’क्चर हुने सम्भावना कम हुन्छ । यदि टायरमा हावाको मात्रा कम भएमा पनि यसमा प्रयोग भएको बिशेष प्रकारको लिक्वुडले बाइक चलाउदै जाँदा हावा पनि बढ्दै जाने हुन्छ । टायरको खरिद गर्दा सधै आफ्नो बाइको क्षम’तालाई मध्यनजर राखेर खरिद गर्नुपर्छ । टायरको उत्पादन मिति राम्रोसँग हेरेर सधै आधिकारी पसल बाट खरीद गर्दा न’क्कली सामानबाट बच्न सकिन्छ । मेरो अटोवाट